Maxay yihiin siyaabaha firfircoon ee loo soo gudbiyo boggaaga dhabarka?
Haddii aad is waydiiso in dhismaha isku xirku wali nool yahay ama aan ahayn, maqaalkani wuxuu ku siin doonaa jawaab cad oo su'aashan ah.
Waxaan ku dhihi karnaa kalsooni ah in isku-xidhka xiriirka uu saameyn weyn ku yeelan karo darajooyinka iyo maamulka calaamadda. Xidhiidhada soo gudbiya waxaa isticmaala matoorada raadinta si ay u go'aamiyaan sida ay ugu haboon tahay ilaha webka ee ereyada muhiimka ah ee ay ku jirto.
Dhab ahaantii, dhismaha xiriirka aan caadiga ahayn ayaa loo tixgelin karaa sida dhimashada. Google wuxuu xannaaneeyaa waxyaabo badan oo ku saabsan tayada xidhiidhada soo galaya iyo wuxuu ogaanayaa dhammaan barnaamijyada dhismaha xiriiriyaha spammy. Xidhiidhka aan laxaadka laheyn ma noqon karo maalin shaqo qof kasta oo xirfadlayaal ah, kuwaas oo mas'uul ka ah soo saarista website-ka caadiga ah ee taraafikada. Maalmahan, tirooyinkaaga xiriirkaagu waxba maaha. Ka dib markii ugu dambeysay ee Google-ka cusub ee 2012, dhammaantood aan dib-u-dhiska dib loo abuurin waxay u baahan yihiin in laga dhigo.
Taasina waa sababta qodobkan aan uga hadli doono kaliya dhismaha xiriirka organic oo weli faa'iido leh 2017. Qodobka tayada ayaa xoojiya xiriirka dabiiciga ah ee dhismaha dabiiciga ah. Dhamaan dadaalkaaga waxaa lagu abaalmarin doonaa darajada sare ee bogga natiijada raadinta. Haddii aad jeclaan lahayd inaad heshid socodka gaadiidka joogtada ah, waxaad u baahan tahay inaad dhisatid noocyo kala duwan oo madaxbanaan oo madaxbanaan.
Si kor loogu qaado maamulka domain, waxaad u baahan tahay inaad dhisid isku xirnaanta ilaha webka sare ee PR oo aad u qiimeeya Google. Sida caadiga ah, waxay u muuqataa in ay adag tahay in la abuuro xiriirka ilaha websaydhka ah haddii aad leedahay ganacsi yaryar ama cusub. Si kastaba ha noqotee, weli waa suurtogal, waxaanan doonayaa inaan sheego sababta. Kaliya raac tabaha dhismaha ee hoose, waxaadna bilaabi doontaa inaad aragto kororka gaadiidka.
Sidee loo soo gudbin karaa boggaaga dhabarka?
Ku noqo qof firfircoon Quora
Quora waa il heer shabeel ah oo waxbarasho oo loogu talagalay inay ka caawiso dadka isticmaala dhibaatooyinka. Waa bilaash iyo fur furan oo loogu talagalay moobiiliyaal ballaadhan oo bixiya waxtarka labada qof ee isticmaala iyo websaydhka. Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad raadiso ereyada muhiimka ah ee la xidhiidha niche market. Natiijo ahaan, waxaad heli doontaa boqolaal kun oo aanad ka jawaabin su'aalaha. Ka dibna ku soo noqo arimaha aad dareemeyso xirfad, iyo haddii ay jirto qayb gaar ah oo xiriir la leh boggaaga oo kaa caawin kara inaad bixiso macluumaad dheeraad ah mowduuca, ku dheji xidhiidh. HARO
Ilaha kale ee webka sare ee PR oo ah meesha aad dhisi kartid dabiiciga iyo tayada dabiiciga ah waa HARO (ka caawi wariye). Waa mashruuc ay saxafiyiinta u tagaan marka ay u baahan yihiin caawimaad. Waxay soo saaraan su'aalahooda, iyo haddii aad ku siin kartid jawaab gaar ah oo caawinaad leh, waxaad heleysaa fursad aad ku hesho saxaafad bilaash ah. Nidaamka raadinta su'aalaha ku habboon wuxuu u shaqeeyaa sida Quora. Waxaad u baahan tahay inaad raadiso raadin adigoo raadinaya ereyadaada raadintaada oo aad ka jawaabeyso keliya su'aalaha aad u maleyneyso karti leh. Haddii saxafi uu helo tayadaada jawaabta, wuxuu ku daabici doonaa bogga internetka ama majaladda sida Forbes, Search Engine Journal ama Entrepreneur. Natiijo ahaan, waxaad heli doontaa casiirka xidhiidhka tayada leh oo lagu beegsanayo socodka gaadiidka. Dabcan ma heli doontid tiknoolajiyada xiriirka ah ee wargeysyada, laakiin hubaal, waxay hagaajin doontaa faahfaahinta xiriirkaaga Source .